Indonesia in Focus: Cunaysaan midho, riyaaqay by deggan cadaabta.
Cunaysaan midho, riyaaqay by deggan cadaabta.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (355)
(Qaybta saddex boqol iyo konton shan), Depok, West Java, Indonnesia, August 23, 2015, 20:17 pm).
Ilaah in uu hadalkiisii ku warqad Saffat Sida aayaadka 62-67 oo dadka u dig in haddii ay ku dhinteen ku jira xaalad ah ka gaalowdaan oo uu shirk (la wadaajiyo Eebe Mushrikiin) ma toobad laga yaabaa (iimaanka iyo dambidhaafna waydiista) ka dibna ay ku hanjabeen in ay la Jahannamo, halkaas oo ay doonayaan siiyo midhaha ka soo baxa hoose ee midho cadaabta ka dib markii galaan caloosha dareemi doonaa sida biyaha oo kulul si fiilloyinka iyo gubi Uur.
Nabiga ayaa sheegay in ay jiraan saddex kooxood in ka dib Maalinta Qiyaame (Maalinta xisaabta qiyaamada / Aakhiro) inay jahannamada lagu tuuri lahaa si dhakhso badan kooxaha kale.
Kooxda hore waa kuwa wax ku barta in uu korka Quraanka doonayaa inaan loo yaqaan Qory, labaad, oo iyagu waa inay jihaadka dagaalka sababtoo ah waxa ay doonayaan in loogu yeedho nin geesi ah, iyo fasalka saddexaad ee hodanka ah waa deeqsi ah (badan siin deeq / sadaqo bixiya) waxaan doonayaa in la ammaano, (liidaa) ,
Sidaas darteed haddii aan dooneyno inaan penghafal Quraanka run ahaantii ujeedka waayo, Ilaah oo doonaya in ay bartaan Quraanka si aan u fahanno karaa waxyaabaha uu ka kooban Quraanka si aanu dib u bilaabi karaan barbarta iyo xoojiyo dhawrsashada na, ma sababtoo ah waxay doonayaan inay ku guuleysato tartanka loogu akhriyey Quraanka (doonayso inaad wacdo Qory) ,
In jihaadka si ay dagaalka waa inay u hoggaansamaan qawaaniinta iyo tiirarka jihaadka diyaarin Quraanka iyo Sunnaha (maxaa yeelay waxa uu doonayaa in loogu yeedho geesi ma), ama mushahar weyn kasban.
Miyayse ku habboon tahay in hay'ad samafal (Sadaqo / deeq) aan run ahaantii daacad ah, Eebana, iyo haddii aan ka geysan kartaa gacan midig, gacanta bidix ma garanayno (aannu ku samayn lahayn ma liidaa / macradka in dadka loo yaqaan shir jaraa'id ku baahinayo natiijada ka mid ah ka qayb qaateen) ,
Marka horeba ku xad ah (kuwa sinaysta) aad sida kor ku xusan, ka dibna inta nolosheena ayaa weli ku jira hunguriga (dalqada) ah, ka dibna isla markiiba waxaan Toobad keena (iimaanka iyo dambidhaafna waydiista) oo markiiba fuliyo tiirarka Islaamka si joogto ah, Salaadda badan, xusidda, akhriska Al -Quran, wax badan oo ka mid ah dareenka oo u kaliyeeli labada waalid ee ilmaha dhalay, iyo caawimo badan oo walaalo ah kuwaas oo hadda ku dhufatay by (cudurkiisa, saboolnimada, deyn fara badan).
Surah Sida Saffat tuduca 62 (Food Jannada) Ma in saxanka fiican ama geedka ka cunaysaan. 63, Sida xaqiiqada ah waxaan geedkii ka cunaysaan sebgai Cadaab u Daalimiinta. 64. illeen, waa geed ka soo Baxday ka hoose ee Naarta Jahannama 65 Mayangnya sida madaxa Ibliiska-Ibliisku (Shaydaan). 66. Waxaa dhab ahaan ay si dhab ah u cuni qaar ka mid ah midhaha geedka, ka dibna ay calooshiisa ka midho ka cunaysaan 67. Markaas ka buuxsamay, ka dib markaad cunto midhihii ka cunaysaan hubiyo in ay heshay cabniin ah ku qasmay biyo aad u kulul.
Dadku ma waxay xor ka yihiin qaladaad, oo yaryar iyo waaweynba, oo og ama aan badheedh. Waxaa intaa dheer, haddii si damaca naftiisa xukumaan. Waxa uu noqon doonaa caasinimada baadkiisa qabanayaan. Daacadnimo, sida haddii uu qiimo ma waxay ka dhigan tahay.
In kasta oo ay ragaadisay caasinimada aadanaha iyo dembi ku hamineysay, taas macnaheedu ma aha mar dambe ma jiro albaabka si loo hagaajiyo. Tan iyo, ka dib markii kordhaya sinaysta camal anoo addoonkaaga ah, laakiin albaabka naxariis mar walba u furan. Aadanuhu waxa la siiyaa fursad ay isku hagaajiyo. Taasi waa, la Toobadda falalka in ay samatabbixin karaan in ay qarka u cadaabta. Repentance waxaa loo sameeyaa waa in guud ahaan, oo waxaa loo yaqaan toobad NASHUHA. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
Aadan kasta oo ilmaha (nin) qalad sameeyay, iyo sida ugu fiican ee aanu eed lahayn waa in ay toobad keenaan. 
Addoomadiisa lahaa Ilaah, dembi ma aydin, Hubaal Ilaah waa abuuri doonaa Khalqi kale, oo dembiyadiinna oo ka dibna u Dambi dhaafa. 
Iyada oo toobadda, waxaan qalbiyadeenna laga Xumaan in nijaasayn daahiriyo aawadeed karin. Waayo, dembigu ee desecrating beerka, iyo waxa daahirka ah waa waajib ku ah. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii dheheen Mu'min ah marka dembi, waxa ay noqon doontaa (dhalatey) hal dhibic si tartib ah oo madow on qalbigiisa. Haddii ayuu isqoomameeyey, ka tagay (ACT) oo ka baryay dambi dhaaf (Eebe), ka dibna uu ku soo laabtay nadiif ah. Laakiin markii kordhaya (dembiga), ka dibna bertambahlah Xumaan madow ilaa iyo inta uu qalbigiisa ka buuxsamay. Haddaba maxaad raan ar (wadnaha iyo dedkeeda) in lagu Xusi, Ilaah eraygiisa "Dhab ahaantii ma (noqon), run ahaantii waxa ay had iyo jeer isku dayaan waxa Quluubtooda ku xidhay. [Al Muthaffifin: 14] 
Ilaah ayaa sidoo kale noo dhiiri gelinayaa in ay toobad keenaan oo beristighfar degdeg ah, sababtoo ah waxa ay wax badan ka wanaagsan yahay L. in dembi. Ayaa sheegay in Eebe.
Markaas hadday toobadkeenaan, waxaa u Khayr Roon, oo Hadday ka jeedsadeen, Eebe cadaabi cadaab daran adduun iyo aakhiraba, oo aysan waligood ka (sidoo kale) mid caawisa oo ku ilaaliya oo aan dhulka. [At Tawbah: 74]
Nabiga wuxuu isu ayaa tusaale in ka qoomameeyey this. Waxa uu sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii badan Toobadkeena oo beristighfar, ilaa xad in saaxiibo ku tirinay by jeer ka badan boqol ee Majliska ah, sida Nafi' Ibn Cumar Maula ayaa sheegay:
Ibn Cumar isticmaalaa in lagu xisaabo (istighfar akhriska) n ee Majliska ah Nabiga kacay waxa ka jeer boqol ka hor, (kaas oo sheegay): Haa Rabbku, ee ii Dambi Dhaaf iyo aqbalo taubatku. Runtii, waxaad tahay qaata Sare toobadda, Dhaafe Naxariista. 
Toobadda iyo Isfahanka NASHUHA
Maxaa loola jeedaa in toobaddii NASHUHA, waa soo celinta addoonkii Ilaah ee dembiga ka abid ka go'an, si ula kac ah ama ay sabab u tahay Jaahil ah, si ay u noqoto qof daacad ah, daacad ah, oo xoog leh oo ay taageerayaan addeecsan-addeeco oo ka sara addoon gaaraan booska ka mid ah wakiillo ka mid ah Muttaqin Ilaah (taxadar) iyo (addeecsan) kaas oo noqon kara ilaaliya Ibliiska naftiisa.
SHARCIGA IYO toobad talinayaa NASHUHA
Sharciga toobad NASHUHA waa Fard 'Cayn (waajib ku ah qof walba) korkiisa kasta oo Muslim ah. Caddeymaha ay:
1. Erayga Ilaah,
Iyo bertaubatlah inay Ilaah, Mu'miniinta O inaad Liibaantaane. [An Nuur: 31].
Kuwa xaqa rumeeyow, bertaubatlah in Eebe Noqosho, oo saafi ah. [At Tahriim: 8].
2. Erayga Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii.
O, Mu'miniinta. Bertaubatlah inay Ilaah, maxaa yeelay, waan ku qiran in Ilaah boqol jeer maalintii. 
Muslimiinta ayaa sidoo kale ku heshiiyay waajib toobadda, sida Imam Al-Qurtubi yiri: "(Culimada) dadka waxay leeyihiin ijma '(heshiin) in sharciga toobadda waa Fard (qasab) Mu'miniinta oo dhan" . Saasuuna Ibn Qudamah kale oo uu dhigayaa .
Samo falku iyo nimcada Ilaah, ballaadhkiisuna wuxuu toobadda NASHUHA
Man welwelin haddii toobad aan lagu aqbalin, sababta oo ah waa nimcada Ilaah waa mid aad u ballaaran, sida Salaadda oo ka mid ah Malaa'igta tilmaamay doorka in Kalimadiisii:
Eebow, nimcada iyo aqoonta aad ka mid ah wax walba, ku siiyo dambi dhaaf in kuwa toobadkeena ee raaca jidkaaga, iyo lehe Cadaabka Jahannamo oo ololaysa. [Al-Mu'min: 7].
ERAYADA toobadda NASHUHA
Si loo aqbalo NASHUHA toobadda Alle Subhanahu wa imtithaal, waxaa jira shuruudo dhawr ah oo ay tahay in la oofin:
Taubat kaliya ka Muslim ah helay. Sida gaalada, markaas toobad waa inay soo galaan diinta Islaamka. Ayaa sheegay in Eebe.
Iyo in toobaddii aan Ilaah waa aqbalay ka mid ah kuwa wax shar (in) ilaa markuu u Yimaaddo mid ka mid ah, (markaas) wuxuu yidhi "Runtii waxaan Toobad keeni hadda". Oo aanay (sidoo kale aqbalay) oo dadka ku dhintay ay ahaayeen Gaalnimo. Dadka in ay leeyihiin waxaan u Darabnay Cadaab Daran. [An-Nisa ': 18].
Taubat aqbalay Shareecada Islaamka, oo waa la dhisay kuwa daacadda ah oo kaliya. Taubat sababta oo ah ujeedooyin riya` ama adduun, ma aha sida tii syar'i toobad yiri. Ayaa sheegay in Eebe.
Kuwa toobadkeena ee wanaajiya iyo maalin walbo (Diinta) Eebe iyo niyada samaa (cadaab sameeyo) Diintooda Eebe mooyee. Markaas waxay si wadajir ah iyo maalin maalmaha ka mid yihiin kuwa rumeeyey Ilaah siin doonaa kuwa rumeeyey xaqa ah ajir wayn. [An-Nisa ': 146].
3. Garashada dembigiisa.
Repentance ma aha sax ah, marka laga reebo dib markii dembi garashada iyo galiyo qalad ah, oo rajo ka badbaaday cawaaqib xun falalka noocaas ah.
4. Full kuwo Qoomameeya.
Repentance kaliya la aqbali karin iyada oo tibaaxaha qoto dheer kuwo Qoomameeya. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
Qoomamo waa toobad. 
5. tegida xadgudubka iyo soo celinta xuquuqda milkiilayaasha ay.
Kuwa Toobad keena oo dembiyadiinna oo ay ka go'an fasax khasab ah oo ku soo celi wixii xuquuq ah milkiilaha, haddii hanti ama wixii la mid ah. Haddii foomka Been ama la mid ah lagu eedeeyay, ka dibna jidka raaligelin. Haddii qaab xan (WAG), ka dibna jidka baryayay waa la ogol yahay (dulqaadan) ilaa iyo inta codsiga sida ma keeno saamayn kale loo kasin. Haa haddii ay tahay saamaynta qabriga, waa ku filan tahay si ay u tukadaan isaga si ay u gaaraan wanaag ah.
6. Muddada toobadda hor neefta ahaa ee hunguriga (dhimasho qarka u saaran) iyo ka hor inta qorraxdu soo baxdana ee galbeed.
Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii ayaa sharxay in erayada uu sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii:
Dhab ahaan yaa Eebe ka aqbalo Toobadda anoo addoonkaaga ah ka hor inta uusan neefsashada ahaa ee hunguriga .
Hijrah aan la kala gooyey ilaa joojinta (waqtigii) toobadda, iyo in toobaddii aan la kala gooyey ilaa ay qorraxdu ka soo baxdo xagga galbeed .
7. Istiqamah ka dib markii toobad keena.
Ayaa sheegay in Eebe.
Markaas waxaad sii jid toosan, sida amray, iyo (sidoo kale) kuwa la joogay aad toobad hana ku xadgudbina xadka. Waxa uu arkaa waxaad Camal falaysaan. [Huud: 112].
8. Samaynta dayactirka dib markii toobadda.
Haddii kuwa Rumeeyey Aayaadkanaga idiin yimid, markaas uu ku odhan, 'Peace-Calaykum, Eebahaa xaggiisa ku fadhiisin naxariis, (kuwaas) in Ruuxii xumaan aad sababtoo ah jahliga ka dhex jira, ka dibna uu toobad ka dib markii ay u qabanayaan dib oo suubiya Camalka, Eebana waa dambi dhaafe Naxariista. [Al An'am, 54].
Xusuusta markuu toobad
1. Aamin in Eebana waa Oge ee arkaya wax kasta. Ilaah wuxuu og yahay oo dhan qarsoon oo qarinaayay ee wadnaha. Inkastoo aan sidaasi uma arko, laakiin waxa uu ku khasbanaaday in uu ku aragnay.
2. Eeg in aad nuxurka durhaai haybad, iyo ma arkaan tirada shayga kuwa sinaysta, sida uu hadalka.
U sheeg in ay Addoomadayda, in sida runta ah waxaan ahay Dambi Dhaafe Naxariista, iyo in azabKu dhabta ah waxaa u sugnaaday cadaab xanuun badan. [Al Hijr: 49- 50].
3. Xusuusnow, dembi in uu yahay oo dhan xun iyo sharka ah, waayo, isagu waa uu caqabad ku yahay farxad gaaro Adduun iyo Aakhiro.
4. laga tago caasinnimada meelaha iyo saaxiibada kuwaas oo si xun u dhaqmaan, kuwaas oo loo isticmaalo in lagu caawiyo isaga dembaabtaan, oo waxay ka jareen xiriirka iyaga la inta ay aan beddelmi wanaagsan.
WAXYAABAHA LOO Block toobad
Waxaa ka mid ah waxyaalaha looga hortago dembi waa:
1. Bidcada Diinta. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
, Eebana xirmin toobad oo dhan xagjirka ahayn. [Ash-Shahihah No. 1620]
2. qabatinka in khamriga. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
Ku alla kii khamri la cabbo (khamriga), ka dibna uu salaadda aan lagu aqbalin afartan habeen. Haddii uu toobad, Ilaah waa ka aqbalayaa. Si kastaba ha ahaatee, marka lagu celceliyo, waxaa haboon marka Ilaah isaga siiyey cabniin ah oo laga bilaabo webiga Khibaal. Dadka qaar waxa ay ku dooneysaa:. "? Waa maxay Khibaal webiga" Waxa uu ku jawaabay, "Malax degan jahannamada 
Saasuuna khuseeya kooban oo ku saabsan toobad NASHUHA. Waxaan rajeynayaa in uu noqon karaa mid waano ah in had iyo jeer toobad keena Eebe Subhanahu wa imtithaal.
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 01 / Year IX / 1426H / 2005M Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL ah. Solo - Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel. 08121533647, 08157579296]